Nevis Tourism Launches Ambassador Program | Saint Kitts and Nevis travel news
Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba zeSaint Kitts neNevis » INevis yoKhenketho iphehlelela iNkqubo yoNozakuzaku
INevis yoKhenketho iphehlelela iNkqubo yoNozakuzaku
IGunya lezoKhenketho laseNevis (i-NTA) linovuyo ukwazisa ngokusungulwa kweNkqubo yoNozakuzaku we-Nevis yoKhenketho, ubuhlakani obubodwa neqela elikhethekileyo laBacebisi ngezoKhenketho, abaPhembeleli kunye neNtatheli. Abameli abathandathu boKhenketho UMargie Jordan-uMcebisi ngezoKhenketho, uWesley Francis-uMcebisi ngezohambo, uBianca Jade – Umphembeleli, uStefanie Michael-Umphembeleli, u-Erinne Magee-Intatheli kwaye UMelissa Corbin-Intatheli.
Abameli boKhenketho bakhethwe ngokusekwe kukuzinikela kwabo kunye nenkxaso yokunyusa iNevis kubaphulaphuli babo. Ngokudibeneyo baya kugqamisa imiba eyahlukeneyo yemveliso yezokhenketho yeNevis -Inkcubeko, iMpilo kunye neNtlalontle, ezothando, ezemidlalo kunye neeCulinary.
"Kuyasivuyisa ukuba aba bantu babalaseleyo abathanda uNevis bavumile ukusebenzisana nathi kwaye babelana ngokwabo ukubona ukuba yintoni eyenza isiqithi sethu sibe yindawo ekhethekileyo," utshilo uJadine Yarde, uCEO. “Siyayibulela inkxaso yabo enesisa, eyindlela enamandla yokuxhasa indawo esiya kuyo. Sijonge ukusebenza ngokusondeleyo kunye nomnye wabo ukuze sizuze ngokufanayo, njengoko sizisa amabali abo eNevis kubaphulaphuli kwihlabathi liphela, ”uqhubeke watsho.
UMargie Jordan inkampani Ukuhamba kukaMargie Ishishini lokucoca ngokuhamba kakuhle e-boutique eFlorida elungiselela iimfuno zabathengi abakhethekileyo. Uye wabonakaliswa kwaye wakhankanywa kwi-Intanethi nakwiipapasho eziprintiweyo, kubandakanya Ukuhamba ngeveki, i ENew York Times, IChicago Tribune, Forbes, Los Angeles Times, Reuters, kunye nabanye.
UWesley Francis "Yintombazana ekwisiqithi esikhuliswe esixekweni" evela eBronx, eNew York. Ungumntu onomdla kwiCaribbean aficionado kunye nesicwangciso sokuhamba, egxile ekuhambeni kweqela kwabasetyhini abadiniweyo kukulinda abanye.
UBianca Jade Ngumsunguli wegama lezeMpilo kunye neNdlela yokuPhila MizzFit, kwaye uhamba e-USA njengoFitness, iMpilo, uBuhle noKhenketho lweNgcali yeendaba kwizitishi zeendaba zasekuhlaleni. Omnye weebhlog zokuqala zomzimba kunye nabaphembeleli elizweni, wafunyanwa liqela leN & R le-Nike elakhokelela kwangoko kumdlalo wakhe wokuqala kwi-The Today Show ngo-2009.
UStefanie Michael, uAgirlGirl, yathiywa igama lokuba “NguThandeka waseMelika” ngu into evanithi ngokuthambile Imagazini ngobukho bakhe bedijithali kwi-Twitter kunye nokukwazi kwakhe ukubandakanya abalandeli, ukuzisa ukubonakaliswa kweempawu asebenza nazo. Uyingcali efunwayo yokuhamba kunye nemithombo yeendaba kwezentlalo, enoluhlu olude lweTV, ushicilelo kunye neempawu ezikwi-Intanethi.
U-Erinne Magee yi Maine esekwe kuhambo kunye neNtatheli yeCulinary kunye nombhali, umsebenzi wakhe upapashwe ngu INew York Times, Washington Post, National Geographic, Ukuhamba + Ukuzonwabisa, Boston Globe, Indlela yaseMelika, URachael Ray, Ushishino ngaphakathi kunye nokuninzi.
UMelissa Corbin yintatheli esekwe eTennessee kunye nentatheli epheka, ebalisa amabali abantu kunye neendawo ezenza ikona yabo ukuba yahluke. Iimpawu zakhe zesizwe zibandakanya Ukutya kunye newayini phephancwadi, Planet Lonely, matador kwaye UTYA, kwaye ivela rhoqo kumabonwakude emini.
Ngolwazi oluthe kratya kwi-Nevis Tourism Ambassadors, kunye nokubona amabali abo, nceda undwendwele https://nevisisland.com/ambassadors
Ulwazi lokuhamba nokhenketho kwiNevis nceda undwendwele iwebhusayithi yeGunya lezoKhenketho laseNevis apha www.nevisisland.com; Kwaye silandele kwi-Instagram (@nevisnaturally), Facebook (@nevisnaturally), iYouTube (nevisnaturally) kunye neTwitter (@Nevisnaturally).
INevis yinxalenye yeFederal of St Kitts & Nevis kwaye ikwiziqithi zeLeeward zeWest Indies. Imile ngokuma kunye nentaba yentaba-mlilo kwiziko layo elibizwa ngokuba yiNevis Peak, isiqithi yindawo yokuzalwa kukayise waseMelika, u-Alexander Hamilton. Imozulu iyaqheleka kuninzi lonyaka ngamaqondo obushushu asezantsi ukuya phakathi ko-80s ° F / phakathi kwe-20-30s ° C, umoya opholileyo kunye namathuba asezantsi emvula. Ukuthuthwa komoya kuyafumaneka ngokulula ngonxibelelwano oluvela ePuerto Rico, naseSt. Ngolwazi oluthe kratya malunga neNevis, iiphakheji zokuhamba kunye neendawo zokuhlala, nceda unxibelelane neGunya lezoKhenketho laseNevis, e-USA Inombolo ye-1.407.287.5204, Canada 1.403.770.6697 okanye iwebhusayithi yethu www.nevisisland.com nakwi-Facebook-Nevis Ngokwendalo.